I-Fluoxymesterone / Halotestin ipowder eluhlaza | I-PAS i-PCT izidakamizwa
I-Fluoxymesterone / Halotestin ipowusi eluhlaza Isingeniso
/Blog/fluoxymesterone , PCT Izidakamizwa/I-Fluoxymesterone / Halotestin ipowusi eluhlaza Isingeniso
ezaposwa ngomhla 01 / 02 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo fluoxymesterone, PCT Izidakamizwa.
Yenza uhlaselo lwebhulogi
1.Fluoxymesterone / Halotestin Intshayelelo 2.Fluoxymesterone / Halotestin KwiHlabathi yoBugcisa
3.Fluoxymesterone / Halotestin Isisombululo 4.Iziphumo zeFluoxymesterone / Halotestin
5.Fluoxymesterone / Halotestin iProfayili Yowunamandla 6.Fluoxymesterone / Halotestin Recipe
7.Fluoxymesterone / Halotestin Imijikelezo & Amanani 8.Buy I-Fluoxymesterone / Halotestin Ubuninzi obuswakama-AASraw
1.Fluoxymesterone Halotestin Intshayelelo
Fluoxymesterone powder, kuthengiswa phantsi kwegama legama elithi Halotestin kunye ne-Ultandren phakathi kwabanye, i-androgen kunye ne-anabolic steroid (AAS) imyeza esetyenziselwa unyango lwamanqanaba aphantsi e-testosterone kumadoda, ukulibazisa ukutshatyalaliswa kwamakhwenkwe kumakhwenkwe, umhlaza wesifuba kubasetyhini, kunye ne-anemia. Kuthathwa ngomlomo.
I-Fluoxymesterone yaqale ichazwa kwi-1956 kwaye yaziswa ngokusetyenziswa kwezobisi kwi-1957. Ukongeza kwindlela yokusetyenziswa kwonyango, i-fluoxymesterone isetyenziselwa ukuphucula umzimba kunye nokusebenza. Isilwanyana yimpahla elawulwayo kumazwe amaninzi kwaye ngoko-ke ukusetyenziswa kwezonyango ngokungekho gwenxa.
Njenge-AAS, i-fluoxymesterone yi-agonist ye-androgen receptor (AR), ngokufanayo ne-orrogens njenge testosterone kunye ne-DHT. I-substrate ye-5A-reductase efana ne-testosterone, kwaye ngokunjalo inokuthi kunokuthiwa nge "androgenic" tisses ezifana nolusu, izinwele zeentloko, kunye neprotate gland nge-transformation kwi-5α-dihydrofluoxymesterone. Ngaloo ndlela, i-fluoxymesterone inomlinganiselo ompofu we-anabolic kwimisebenzi ye-androgenic efanayo testosterone kwaye methyltestosterone.
I-Fluoxymesterone ibikwa ukuba ayinakuncitshiswa ngenxa yokuphazamiseka kwesiqhelo ngeqela layo leC11β hydroxyl, kwaye ke ingathathwa njengento ebonakalayo yokuvelisa iziphumo ze-estrogenic ezifana ne-gynecomastia okanye ukugcinwa kwamanzi. Nangona kunjalo, ngokukrakra, ingxelo yecala ye-fluoxymesterone-induced gynecomastia ikhona, kunye ne-gynecomastia ehambelana ne-fluoxymesterone nayo ibhengezwe kwezinye iincwadi, nangona oku kungenako ngenxa yesenzo se-estrogenic. I-Fluoxymesterone icingelwa ukuba inomsebenzi omncinci okanye akukho progestogenic.
Ngenxa yobukho beqela laso le-17α-methyl, i-metabolism ye-fluoxymesterone inqatshelwe, okwenza ukuba isebenze ngomlomo, nangona i-hepatotoxic.
I-Fluoxymesterone ine-80% ye-oral availability, ngokungafani ne-testosterone, njengoko i-C17α i-methyl iqela le-fluoxymesterone inqanda i-metabolism yokuqala. Unobumbano obuphantsi kakhulu kwi-serum ye-sex-hormone-binding globulin (SHBG), ngaphantsi kwe-5% yee testosterone kwaye ngaphantsi kwe-1% ye-DHT. Isilwanyana sisetyenziselwa isibindi, ikakhulukazi nge-6β-hydroxylation, i-5α- kunye ne-5β-ukunciphisa, i-3α- kunye ne-3β-keto-oxidation, kunye ne-11β-hydroxy-oxidation. I-metabolites yayo eyaziwayo iquka i-5α-dihydrofluoxymesterone kunye ne-11-oxofluoxymesterone. I-Fluoxymesterone ine-half half-life-off of about 9.2 iiyure, elide lide nelo le testosterone. Ipheliswa kumchamo, ngaphantsi kwe-5% yenziwe ingatshintshi.
Ku vavanyo lwe-halotestin, i-residu eyomileyo efunyenwe kwisampula yomchamo ichitheka kwi-dimethylformamide kunye ne-sulfur-trioxide-pyridine eyinkimbinkimbi kwaye ishushu isisombululo se-potassium carbonate ye-1. I-Halotestin kunye ne-metabolites yayo eninzi iqulethe amaqela e-polar hydroxyl, ekhokelela ekubambeni kwe-hydrogen e-intermolecular eyandisa ukwanda kwawo kunye nokunciphisa ukunyanzelisa. Ukuze ufumane isampuli esinokugcoba i-GC-MS, iimveliso ze-hydrolysis zikhishwe, zichithwe kwi-methanol kwaye zithathwa ukuba zenze ama-ester angama-trimethylsilyl (TMS) azinzileyo ngokufaka i-N-methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide (MSTFA) kunye ne-trimethylsilylimidazole.
2.Fluoxymesterone Halotestin kwiHlabathi yoBugcisa
I-Halotestin (i-fluoxymesterone), eyaziwa nje ngokuba yi-halo kwihlabathi le-fitness, yenye yezonabolic-androgenic ezinamandla kakhulu steroids ziyafumaneka kwaye ziza kwifom yomlomo. Kwakhiwa ngokumangalisa ekupheleni kwe50 kunye nokusetyenziswa kwezobugcisa kule ngqungquthela kukunceda amakhwenkwe aphelelwe lixesha lokutshatyalaliswa.
Kwihlabathi lomzimba i-Halotestin ithathwa njengokhetho oluthandwa kakhulu kubaphambili bamandla kunye nabadlali bamandla; nangona kunjalo, kubuye kube nzima kakhulu kunye ne-cutter steroid kubakhi bomzimba, nangona iimiphumo zempembelelo zingenza i-counter counterproductive productive (ngaphezulu kwelo xesha). Abo basebenzisa iHalo baya kubika ukwanda kwamandla ngokukhawuleza ngaphandle kokunyuka kwamanzi, oku kubangelwa u-anabolic kunye ne-androgenic. Kwiphepha le halo li malunga ne-20X ngakumbi i-anabolic kune-testosterone kwaye i-10X enye i-androgenic. Ngoku, andiqinisekisi ukuba loo manani achanileyo ngokwenene kodwa esebenzisa i-halo, kwaye ukuba ufunda ngeenxa zonke iibhodi zeemyalezo, ngokuqinisekileyo uya kusebenzisa enye ye-AAS enamandla kakhulu.
Inxalenye emangalisayo yale ngqungquthela kukuba ayikho imisebenzi ye-estrogenic njengoko ikhankanywe kwangaphambili ukuze ukuzuza kwakho kube ngamanzi mahhala. Oku kwenza ukuba kube ngumgqibi oqhelekileyo kwiimjikelezo phambi komncintiswano. Ngelishwa nje njengazo zonke izinto ebomini kufuneka uthathe okulungileyo kunye nokubi. Okokuqala off, njengoko unako mhlawumbi kuthathwa, Halotestin na isibindi kakhulu yityhefu ngoko awunaku kwazi ukusebenzisa le umchiza ixesha elide okanye iidosi eziphezulu. Kwakhona, ekubeni ibukhali kwaye inamandla kwaye iya kukwandisa amandla ngokukhawuleza, unokulindela ukuba uzive ukhululekile kwaye uziva utyhalekile.
Ingxaki ephambili inokuba yinto yokuba i-halo iya kubangela ukuba isibalo se-red cells sinyuke ngokukhawuleza. Oku kunokuba ngumsebenzi onokuvelisa kwaye kuthintela iinkalo ezininzi zobomi bakho, kubandakanywa nokusebenza kwakho nokulala kwakho. Kubalulekile ukuba uthathe izibonelelo zokuncedisa ukuze uncede nge-lipid yakho. A ukhetho smart babeza N2guard kwi 10-12 iminqwazi ngosuku, nokuba nikunyamekele ukuba kuphazamisa iipateni zakho zokulala ngoxa. Ufuna ukusebenzisa iikhalori njengamafutha ukuze ungaziva ugugile. Abo bahlelwe yintsilelo yekhalori baya kufumana iziphumo ezintle, kodwa baya kuhlawula ixabiso kwaye bazive behla phantsi lonke uhambo. Ukunika igazi yinto efanelekileyo kakuhle.
Ekubeni i-halo i-androgenic kwaye unokulindela ukuba uzive ukhulu. Kubalulekile ukuba ungasebenzisi iHarotestin ukuba untsha kwi-steroids ngenxa yokuba ukwanda kwe-androgens kuya kuba nzima ukulawula umsebenzisi we-newbie.
Isilinganiselo se-halo akufanele sidlule i-40mg ngosuku okanye ungena kwindawo engozi yokusebenzisa kakubi le steroid. Kufuneka kwakhona kubangaphaya iiveki 5-6 kwaye ukuba iiveki 4 ngokunyaniseka kunokuba ikepusi ekrelele kuba esi steroid ukuze ufumane udiniwe yokusebenzisa, akukho kune ekujongwe. Abanye abantu abafakiweyo bathanda ukuthatha i-10mg ngaphambi kokuba baqhube umsebenzi wokunyusa kwaye batyelele yonke imilinganiselo yabo emini. Ekubeni i-halo inobomi obuncinane bemizuzu (6-8hours) esi sicwangciso siyakufaneleka. Mna mna xa ndigxininisa kumandla kunyaka uya kuqhuba i-20-30mgs ngosuku elipheleleyo, kwaye uthathe ii-10-20mgs iiyure ze-2 ngaphambi kwam amandla okuqhuba i-punch eyongeziweyo.
Ndabona kwakhona ngelixa i-Halo isisindo sam umzimba andiyi kunyuka kwaye kunoko ndikhangeleka kakhulu kunzima. Ngenxa yesi sizathu njengoko kuchaziwe ngaphambili abanye abafana ungathanda ukusebenzisa halo njenge noMgqibelelisi ngaphambi kokhuphiswano, kodwa njengokuba nam okhankanywe ngaphambili ungafumana iziphumo efanayo kunye nezinye iikhompawundi nendlela neziphumo ngaphantsi ebezingalindelekanga kwaye ngenxa yesi sizathu guys baye bavuke masteron or winstrol endaweni yoko.
Kuze kube ngokugqithisa, iHalotestin inokuthi isebenze ngokucacileyo yodwa. Zama 20mg ngosuku iiveki 3-4 kwixesha lokuqala, ngoko unga zama ukusuka apho idosi eliphezulu kwaye linga ingqokelela kunye Equipoise okanye testosterone. Andiyi kubeka i-halo kunye nezinye iindawo ezinzima ezifana ne-trenbolone kwaye ngokuqinisekileyo andizange ndiyibeke ngomnye umlomo ngaphandle kokuba unamava kakhulu kwaye uphumelele.
Abafazi mabangacingi ukuba basebenzise iHalo phantsi kweyiphi na imeko.
4.Iziphumo ze Fluoxymesterone/ Halotestin
Imiphumo yeHalotestin, ngelixa amandla amakhulu ayimeleli ukuba siza kubhala njani i-anabolic steroid ephilileyo. Le steroid ithatha amanqaku athile asebenzisekileyo, kwaye nangona ingaba luncedo kwimiphumo emibi iya kwenza ukuba kungabalulekanga kumadoda amaninzi. Iziphumo eziphambili zeHalotestin zixhomekeke kumandla kunye nobudlova. Ingxaki yobudlova kunye ne-anabolic steroids idlalwa ngokukhawuleza, kodwa kwimeko yeHalo yona inokunyusa ukunyusa. Oku kungenza ukuba umdlali aqhube nzima kwaye abe namandla ngakumbi.
Nangona iyakwazi ukuphucula ubugqwetha kukho izinto ezibalulekileyo zokugcina engqondweni. I-Halotestin ayikwazi ukuguqula ubuntu bakho, kuthinte ikhono lakho lokuhlukanisa phakathi kokulungileyo nokungalunganga okanye utshintshe inkqubo yokwenza izigqibo. Inokunika umntu umntu onamandla, onobundlobongela, kodwa oko umntu akwenza ngobudlova inquma ukuba kulungile okanye kuyiphutha. Ukunyamezela ngokwayo akuyona into embi, ingaba ithuluzi elihle kakhulu; into esiyenzayo ngobudlova inquma ukuba kulungile okanye kuyiphutha. Ngomntu oqhelekileyo enobudlova kunye nentukuthelo, ukusebenzisa iHalotestin kuya kumenza ibe ngumsindo onamandla. Ngomntu ngamnye, uya kuba nobudlova obuninzi ukuba abekwe kwindawo yokuzivocavoca okanye ukhuphiswano.
Ngenxa yamandla kunye nokukhuthazwa kobudlova, oku kwenza iHototestin i-steroid ethandwayo phakathi kwabaxhasi bamandla, abadlali beemidlalo kunye nabaqaphi masinyane ngaphambi kokhuphiswano. Iiveki ezimbalwa zokusetyenziswa ezikhokelela ukhuphiswano ziqhelekileyo, kwaye ukukhuliswa ngamandla kunokuba kube mkhulu kunanoma iyiphi enye i-anabolic steroid. Amandla afanayo kunye nobudlova nako kunokuba luncedo kumqhubi womzimba okhuphisanayo ngeeveki ezimbalwa ngaphandle kwenkqubo yakhe. Ukunciphisa umzimba ngomzimba kubuthathaka kwaye mhlawumbi indlela eyona nzima kakhulu yokutya emhlabeni.
Ukufikelela ekugqibeleni uninzi luye lwaxinwa kwaye lube nexesha elinzima kakhulu ukunyusa ngokuqeqesha kwabo. Ukongeza kwiHalotestin kwezo ntsuku ezimbalwa zokugqibela kunokubanceda ukuba baphumelele ngeli xesha elinzima kakhulu. Kuya kunika nomntu ngokubonakala kanzima kunye nokuchazwa ngakumbi; Noko ke, kukho inqaku elibalulekileyo. Ngoxa i-Halo ingakwazi ukuphucula kakhulu imeko ehambelanayo neyobubambano, kufuneka uxhomeke kakhulu, ukhuphiswano lomzimba luxhomekeke ekufumaneni nantoni na. Abasebenzisi abaninzi be-steroid abayi kuze babone le nqanaba lokuxhamla kwaye akuyi kuba nenjongo yokusetyenziswa kubo.
Oku kubandakanya kakhulu imiphumo yeHalotestin malunga nemiphumo ebalulekileyo. I-steroid ayiyiyo isakhiwo steroid yesakhiwo, kwaye ayilona esisetyenziswa njengesiseko steroid kunoma yimuphi umjikelo. Eli lixesha elifutshane lokusebenzisa i-steroid ephethe iinjongo ezithile kwiinjongo ezithile. Kwimeko yokwelapha, ngelixa livunyiwe ngamanye amaphulo enyango, ludlulele kakhulu.
5.Fluoxymesterone/ Halotestin Powder profayile
Igama: I-Fluoxymesterone / Halotestin
Isisindo somzimba: 336.4457
Ifomula: C20 H29 F O3
I-Melting Point: 240C
Isitoreji sokugcina: RT
Umbala: Umelele oMhlophe
I-Dose esebenzayo: 10-40mgs / imini
Ubomi obusebenzayo: ii-6-8 iiyure
Ixesha lokuva: Iinyanga ze-2
Umlinganiselo we-Anabolic / Androgenic: 1,900 / 850
Umsebenzi we-Anabolic: 1900% ukusuka kwi-testosterone.
Umsebenzi weAndrogenic: 850% ukusuka kwi-testosterone.
Umgangatho wokuguqulwa kwi-estrogen: akukho niselo.
Inqanaba lokutyhila kwesibindi: inetyhefu ephezulu.
6.Fluoxymesterone/ Halotestin Recipe
Ithebhulethi yeHalotestin, yokulawula ngomlomo, iqukethe i-2 mg, i-5 mg okanye i-10 mg
AMANQAKU OKUQHUBEKA NGEMINYE: I-Halotestex, i-Halotestex tabeltes, i-Fluoxymesterone, i-Halotestin, i-Android-F, i-Ultandren, i-Hysterone Tabs, i-Stenox, i-Ora-Testryl, i-Halotestin
ISIFUNDO ESISEBENZA: I-Fluoxymesterone 10mg / capsule Iifomsi ze-30
7.Fluoxymesterone / Halotestin Imijikelezo & Amanani
Isiqalo seHototestin Imijikelezo:
Isiqalo sokuqala se-Halotestin Isibonelo (iiveki ze-12 zexesha lexesha elijikelezayo)
Iiveki 1 - 12:
- Testosterone Inanthate kwi-300 - 500mg / ngeveki
Iiveki 1 - 6:
- Halotestin (i-Fluoxymesterone) kwi-20mg / imini
I-Intermediate Halotestin Imijikelezo:
Isibonelo esiphezulu se-Halotestin Isibonelo (iiveki ze-12 zexesha lokujikeleza elipheleleyo)
- Testosterone Inanthate kwi-100mg / ngeveki
- Deca Durabolin (uNandrolone Decanoate) kwi-400mg / ngeveki
- Halotestin (i-Fluoxymesterone) kwi-30mg / imini
Isibonelo esiphezulu se-Halotestin Isibonelo (iiveki ze-10 zexesha elijikelezayo elijikelezayo)
Iiveki 1 - 10:
- Testosterone Propionate kwi-100mg / ngeveki (25mg yonke imihla)
- I-Tetbolone Acetate kwi-400mg / ngeveki (100mg yonke imihla)
Iiveki 6 - 10:
- Halotestin (i-Fluoxymesterone) kwi-40mg / imini
8.Buy I-Fluoxymesterone / Halotestin Ubuninzi obuswakama-AASraw
1.Qhagamshelana nathi nge-imeyile yethu inkqubo yophando, okanye i-skype ye-intanethi ummeli wenkonzo yamakhasimende (CSR).
Ingcaciso engakumbi ngemveliso echaphazelekayo,wamkele ukucofa apha
Iziyobisi zePCT zokubuyisa -Nolvadex, Clomid, Letrozole, Aromasin, Halotestin
Kuphi ukuthenga i-Trenbolone i-Acetate powder?	GW 501516 / Cardarine Ulwazi oluyisiseko
I-Nandrolone Phenylpropionate (NPP) powder
I-Masteron Inanthate (Drostanolone) ipowder
I-LGD3303 powder (1196133-39-7)